Jidadka Magaalada Jigjiga oo Dhowaanahan Saxmadoodu Badatay. | Hargeysa World~Herald
Jidadka Magaalada Jigjiga oo Dhowaanahan Saxmadoodu Badatay.
UncategorizedJidadka Magaalada Jigjiga oo Dhowaanahan Saxmadoodu Badatay.
Booliska ilaalada waddooyinka iyo Xafiiska Ganacsiga Iyo Gaadiidka DDS oo ka arrinsaday yaraynta saxmadda magaalada Jig-jiga.
Kulankan ayay labada dhinaca iskaga xog-waraysanayeen caqabadaha gundhigga u ah cidhiidhiga waddooyinka iyo sidii loo dhimi lahaa dhinac walbana waajibaadkeeda gaar ahaaneed u qaadan lahaayeen.
Booliska ilaalada waddooyinka ayaa soo dhigay talo-bixinno la xidhiidha hannaanka loo hirgalin karo sharciga in marka hore la sameeyo caalamadihii waddooyinka.
Wasiir-ku-xigeenka Xafiiska Ganacsiga Iyo Gaadiidka DDS Marwo C/casiis ayaa sheegtay in gacanta lagu hayo samaynta laydhka hagista baabuurta, wakhti dhawna la samayn doono caalamadihii kale ee waddooyinka.
Gaashaanle-sare Cali Cabdi Jabbaar, ku-xigeenka Komishinka Booliska DDS ayaa sheegay in ku-shaqaynta sharciga waddooyinka ay bulshadu ilaaliyaan, ciddii xad-gudub samaysana wuxuu sharcigu u gooyo leedahay.